Somaliland oo beenisay in la xirayo masaajidda Hargeysa | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Somaliland oo beenisay in la xirayo masaajidda Hargeysa
Somaliland oo beenisay in la xirayo masaajidda Hargeysa
Hargeysa (Halqaran.com) – Mas’uuliyiinta Wasaaradda Diinta iyo Aw-Qaafta Somaliland ayaa sheegtay in aan la xirayn Masaajida.
Wasiirka diinta ee Somaliland Sheekh Khaliil ayaa sheegay in aysan jirin tilaabo ay ku doonayaan in ay maanta ku xiraan Masaajidda.
Wasaaradda ayaa sheegtay in aan markii horeba guddidu dhihin ha la xiro Masaajida balse ay ku taliyeen in dadku Guryahooda ku tukadaan, go’aankaasi dib looga laabtay.
Sidoo kale Maamulka Puntland ayaa horay shaaca uga qaadey in uu ka laabtey Amar ay horey u soo saareen oo ahaa in la xiro dhammaan masaaajidda iyo dugsiyada Qur’aanka, si looga fogaado faafidda Cudurka Coronavirus.
Tallaabadaan ayaa ka dambeysay, kadib markii Wasiirka Cadaaladda Puntland Cawil Sheekh Xaamud oo kulan xasaasi ahaa la qaatey Culimada Masaajida, isaga oo u sheegay inay qafiifiyeen go’aankii ahaa in la xiro Masaajida.
Somaliland oo beenisay in la xirayo magaajidda Hargeysa